दशैँ–तिहारको विदामा घुम्ने हाे ? यी हुन घुमफिरका लागि उत्कृष्ट १२ गन्तव्य ! - Manaslu Post
मनास्लु पोष्ट २५ आश्विन २०७५, बिहीबार २२:१५ 784 पटक हेरिएको
बर्षेनी लाखौँ विदेशी पर्यटकहरुलाई आतिथ्य सत्कार दिने नेपालीहरु विस्तारै आफू पनि आन्तरिक पर्यटक बनेर घुमफिरका लागि देशका विभिन्न रमणीय स्थानमा जान थालेका छन्।
दशैँ–तिहारको समय बढी फुर्सदिलो समय हो। यही बेला मौसम पनि सफा बनेर प्रकृतिकलाई मनमोहक बनाइदिन्छ। त्यही भएर पनि दशैँको विदामा धेरै नेपाली घुमफिरमा निस्किन मन पराउँछन्।
यो दशैँमा घुमफिरका लागि देशभित्रैका कुन कुन ठाउँ उपयुक्त हुन सक्छन्? नेपालखबर यी १२ गन्तव्य सिफारिश गर्दछ:
पहाडको टुप्पोमा अवस्थित सानो सुन्दर स्थान हो, भेडेटार। घाम र बादले आपसमा लुकामारी खेल्दै गर्दा त्यहाँ पुगेका पर्यटकहरु रोमान्चित नभई बस्नै सक्दैनन्। भेडेटारमा बाह्रैमास चिसो हावा बहने भएकाले त्यहाँ पुग्दा आनन्द महसुस हुन्छ। भेडेटारबाट मकालु, कञ्चनजंगा, कुम्भकर्ण हिमालका मनोरम दृश्य समेत देखिन्छ।
भेडेटारदेखि पश्चिममा ३० फिट अग्लो चाल्स प्वाइन्टमा टावर छ। मौसमले साथ दिएमा टावरबाट सप्तकोशीको बिहंगम दृश्य एवं धरान, धनकुटासहितका स्थान देख्न सकिन्छ। भेडेटारबाट चाल्र्स प्वाइन्ट, नमस्ते झरना, नाम्जे गाउँ, हिले पुग्न त्यति धेरै टाढा छैन। धरानबाट १७ किमी र विरटनगरबाट ४० किमी दुरीमा रहेको छ, भेडेटार। त्यहाँ घुम्न चाहनेहरु सजिलै सडक मार्गबाट पुग्न सक्छन्। होटलहरु पनि भएकाले बास बस्न खानपिनको कुनै समस्या छैन। धरान झरेर पनि पर्यटकले रात बिताउन बितान सक्छन्।
नेपालको पहिलो र ठूलो रामसार क्षेत्र हो, यो। यो आरक्षलाई ‘अर्नाको राजधानी’ भन्ने गरिन्छ। चराहरुको स्वर्ग समेत मानिने यो आरक्षमा हाँस, बकुल्ला, गरुड, सारस लगायत करिब ४ सय ९० प्रजातिका चरा पाइन्छन्। चरा अवलोकन गर्न चाहने पर्यटकहरूले यस आरक्ष मन पराउने गरेका छन्। सन् १९८७ मा रामसार सूचीमा सूचिकृत कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष १ सय ७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
यहाँबाट एकैपट तीन अलग–अलग मौसमको अनुभव गर्न सकिन्छ। यहाँ घुम्न चाहने पर्यटकहरुले खान बस्न कुनै प्रकारको समस्या भोग्नु पर्दैन। यो आरक्ष क्षेत्र विराटनगरबाट ५० किमि र धरानबाट ४० किमि टाढा छ।
नेपालको उत्कुष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक हो, सौरहा। ‘वाइल्ड लाइफ’ मन मराउनेहरुका लागि यो उपयुक्त स्थान हो। जंगल सफारी, हात्तीसँगै स्नान, हात्तीसँग सम्बन्धित खेलहरु, थारु संस्कृति, राप्ती नदीमा डुंगा सयर सौरहाको आकर्षण हुन्।
यहाँ खान– बस्नका लागि रिसोर्ट, होमस्टे, लज तथा उच्चस्तरका होटलहरु उपलब्ध छन्। चितवनको सौराहा राजधानी काठमाडौं एवं देशका अन्य स्थानबाट पनि सडक एवं हवाई मार्गबाट सहजै पुग्न सकिन्छ।
सगरमाथाको प्रदेशद्वार पनि हो जिरी। जहाँ जिरेल जातिको बसोबास छ। सुन्दर बस्ती, चेर्दुङ महादेवको मन्दिर, रोलवालिङ क्षेत्रका रमणीय दृश्यावलोकन, झरनाहरु यहाँका विशेषता हुन्। पर्यटकीय स्तरका होटल, लज, होमस्टे उपलब्ध छन्।
जिरीसम्म सडक यातायातबाट पुग्न सकिन्छ। काठमाडौँ–जिरीको दुरी ७ घण्टा छ। काठमाडौँबाट २ सय ५ किमि दुरीमा रहेको जिरी ७ घण्टामा पुग्न सकिन्छ।
ताल र गुफाहरु यहाँका मुख्य आकर्षण हुन्। प्यारा ग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट उडान जस्ता हवाई खेलका लागि समेत पोखरा चर्चित छ। पोखराको लेक साइड, विभिन्न तालहरु, गुफाहरु, पातले छाँगा, सराङ्कोट, विन्दवासिनी मन्दिर, सेतो गुम्बा पोखराका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य हुन्।
बाहेक घान्द्रुक साथै, हिम श्रृङ्खलाहरुको दृश्यावलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय यहाँका आकर्षण हुन्। अत्यधिक संख्यामा सुविधासम्पन्न होटल भएकाले यहाँ बासस्थानको पनि समस्या छैन।
खड्ग शमशेरले आफ्नी रानीको सम्झनामा निर्माण गरेको मनोहर भवन हो रानी महल। रानी महल अवलोकनका लागि जाने सिलसिलामा पाल्पा दरबार, श्रीनगर डाँडा, भैरवस्थान, राम्दी सुन गुफा जस्ता पर्यटकीय स्थानको पनि भ्रमण गर्न सकिन्छ। पाल्पा सदरमुकाम तानसेनबाट १७ किमिकोे दुरीमा रहेको रानी महलसम्म गाडीमा १ घण्टामा पुग्न सकिन्छ। तानसेनसम्म पुग्न सडकमार्गको पहुँच छ।१०. सिँजा उपत्यका (जुम्ला)
मुगु जिल्लामा अवस्थित राता ताल नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो। बाह्य र आन्तिरिक पर्यटकको मुख्य गन्तव्य पनि हो रारा। समयअनुसार रंग बदलेको अनुभूति लिन सकिने भएकाले तालको नजिकै पुग्न धेरैले रहर गर्छन्। रारा ताल पुगे पछि रारा राष्ट्रिय निकुन्ज, मर्मा टप, हिम शृंखलाको दृश्यावलोकन र दुर्लभ माछा तथा जल पंक्षीहरुको अवलोकन गर्न सकिन्छ। रारा घुम्न जाने पर्यटकले खान बस्नका लागि कुनै पनि खालको असुविधा महसुस छैन। यहाँ पुग्न सुर्खेतबाट हवाई र सडक दुबै यात्रा गर्न सकिन्छ